Gold (2016) | MM Movie Store
စီးပှားရေးနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ကားတှထေဲမှာ ကွညျ့ပွီးသလောကျ ကြှနျတော့ရငျထဲကို တဈသသစှဲကနျြစလေောကျအောငျကောငျးတဲ့ (၂)ကားရှိတယျ…ပထမ တဈကားကတော့ The Wolf of Wall Street (2013) ဖွဈပွီး ဒုတိယကားကတော့ ယ်ခု Gold(2016) ဆိုတဲ့ကားပါပဲ….
(၂)ကားလုံးဟာ ဖွဈရပျမှနျကို အခွခေံထားကွသလို သရုပျဆောငျတှကေလညျး ဒိတျဒိတျကြဲမငျးသားတှဖွေဈတဲ့ Leonardo နဲ့ Matthew တို့ ကိုယျစီသရုပျဆောငျထားကွတယျ…
Rating အနအေထားအရ The Wolf of Wall Street ကိုတော့မမှီနိုငျပမေယျ့ အဲ့ဒီကားနီးပါးကောငျးတယျလို့တော့ ပွောလို့ရမယျထငျတယျ…ဒီကားအတှကျ Matthew ဟာ ကိုယျအလေးခြိနျ ပေါငျ(၄၀)တကျအောငျပွုလုပျခဲ့ရတယျ…ဗိုကျရှဲရှဲ အရကျတမွမွ စဈကရကျမီးခိုးတဈအူအူနဲ့ Matthewကို အားမာနျပါပါ ဒီကားထဲမှာတှရေ့လိမျ့မယျ…
ဇာတျကားအကွောငျးကိုနညျးနညျးသှားရအောငျ….ကနျနီဝဲလျဈဆိုတဲ့သူတဈယောကျပိုငျတဲ့ ရှတေူးဖျောရေးကုမ်ပဏီတဈခုရှိတယျ…..ကနျနီတို့ ဘိုးဘှားစဉျဆကျပိုငျခဲ့တဲ့ကုမ်ပဏီဖွဈသလို သူကိုယျတိုငျကလညျး ဒီအလုပျကို ခဈြမွတျနိုးတယျ…သို့ပမေယျ့ ကနျနီလကျထကျမှာ ကုမ်ပဏီက ကရြှုံးလုနီးပါးဖွဈနတေယျ…
ဒီလိုအခွအေနမှော ကုမ်ပဏီကိုပွနျအဖတျဆယျဖို့ ဘယျသူမှမလုပျရဲတဲ့အလုပျတဈခု လုပျဖို့သူဆုံးဖွတျလိုကျတယျ…အဲ့ဒါကတော့ အငျဒိုနီးရှာကိုသှားပွီး ရှကွေောကွီးရှာဖို့ ဘုမိဗဒေပညာရှငျတဈယောကျနဲ့ ပေါငျးပွီး ရှာဖှဖေို့ စှနျ့စားခဲ့ပါတော့တယျ…
ဒီရှာဖှဖေို့အတှကျ ရှိသမြှစညျးစိမျပုံအောရသလို သူပူးပေါငျးတဲ့ ဘူမိဗဒေပညာရှငျပွောဆိုတဲ့ ရှတေူးဖို့နရောကလညျးတခွားပညာရှငျတှအေားလုံးက ငွငျးပယျထားတဲ့ နရောကွီးဖွဈနပေါတယျ..ကိုငျးရှကွေောကွီးကိုတှမေ့လား…..သူအောငျမွငျမလား…. ခေါငျးပုံဖွတျခငျြတဲ့ကုမ်ပဏီကွီးတှကေရော ကနျကို ဘယျလိုတှဖေိအားပေးမလဲ….ကိုငျးခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….
စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကားတွေထဲမှာ ကြည့်ပြီးသလောက် ကျွန်တော့ရင်ထဲကို တစ်သသစွဲကျန်စေလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ (၂)ကားရှိတယ်…ပထမ တစ်ကားကတော့ The Wolf of Wall Street (2013) ဖြစ်ပြီး ဒုတိယကားကတော့ ယ္ခု Gold(2016) ဆိုတဲ့ကားပါပဲ….
(၂)ကားလုံးဟာ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားကြသလို သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Leonardo နဲ့ Matthew တို့ ကိုယ်စီသရုပ်ဆောင်ထားကြတယ်…
Rating အနေအထားအရ The Wolf of Wall Street ကိုတော့မမှီနိုင်ပေမယ့် အဲ့ဒီကားနီးပါးကောင်းတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်…ဒီကားအတွက် Matthew ဟာ ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်(၄၀)တက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်…ဗိုက်ရွှဲရွှဲ အရက်တမြမြ စစ်ကရက်မီးခိုးတစ်အူအူနဲ့ Matthewကို အားမာန်ပါပါ ဒီကားထဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်…
ဇာတ်ကားအကြောင်းကိုနည်းနည်းသွားရအောင်….ကန်နီဝဲလ်စ်ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ ရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိတယ်…..ကန်နီတို့ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ပိုင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်သလို သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီအလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးတယ်…သို့ပေမယ့် ကန်နီလက်ထက်မှာ ကုမ္ပဏီက ကျရှုံးလုနီးပါးဖြစ်နေတယ်…
ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကုမ္ပဏီကိုပြန်အဖတ်ဆယ်ဖို့ ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲတဲ့အလုပ်တစ်ခု လုပ်ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…အဲ့ဒါကတော့ အင်ဒိုနီးရှာကိုသွားပြီး ရွှေကြောကြီးရှာဖို့ ဘုမိဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းပြီး ရှာဖွေဖို့ စွန့်စားခဲ့ပါတော့တယ်…
ဒီရှာဖွေဖို့အတွက် ရှိသမျှစည်းစိမ်ပုံအောရသလို သူပူးပေါင်းတဲ့ ဘူမိဗေဒပညာရှင်ပြောဆိုတဲ့ ရွှေတူးဖို့နေရာကလည်းတခြားပညာရှင်တွေအားလုံးက ငြင်းပယ်ထားတဲ့ နေရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်..ကိုင်းရွှေကြောကြီးကိုတွေ့မလား…..သူအောင်မြင်မလား…. ခေါင်းပုံဖြတ်ချင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကရော ကန်ကို ဘယ်လိုတွေဖိအားပေးမလဲ….ကိုင်းခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….
Tootsies & The Fake (2020)
Emily in Paris (Season 1) ၊ အပိုငျး (၁)
Mr. Robot (Season 2) အပိုငျး (၁၀)
The Boys (Season 2) ၊ အပိုငျး (၇)